अप्ठ्यारो परिस्थितिमा गुज्रिइरहेका हामी - निष्पक्षखबर
अप्ठ्यारो परिस्थितिमा गुज्रिइरहेका हामी
चीनबाट शुरु भएको कोरोना भाइरसले अहिले विश्वलाई त्रसित बनाइरहेको छ । नेपालीको घरआँगनसम्म भाइरसको संक्रमण फैलिइरहेको छ ।
नेपालमा गत चैत ११ गतेबाट शुरु भएको लकडाउनसँगै बन्द भएका हरेक क्षेत्रहरु अहिलेसम्म पनि उस्तै अवस्थामा छन् । आपतकालीन सेवाबाहेक अरु सबै क्षेत्रहरु पूर्ण रुपमा बन्द छन् । अर्काको देखासिकी भनौँ वा आफ्नै बौद्धिकताको कारण हो सरकारले लकडाउनलाई अझै लम्ब्याइरहेको छ ।
सबै जनता एउटा बन्द कोठाभित्र थुनिन बाध्य भएका छौँ । वैकल्पिक उपाय नपाएर नै होला सरकारले लकडाउनलाई पछ्याइ नै रहेको छ अनि त्यही लकडाउनलाई आफ्नो अभिभावक ठानिरहेका छौँ हामी जनता ।
आम नागरिकहरुमा कोरोनाको जोखिम त छँदैछ नै त्यसमा पनि अब दैनिकी कसरी चलाउने भन्ने अर्को सङ्कट आइपरेको छ । प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा सरकारमार्फत् सेवा सुविधा पाउने व्यक्तिभन्दा सर्वसाधारणलाई अहिलेको बन्दले धेरै नै अप्ठ्यारो पारेको देखिन्छ ।
बन्द भए पनि सामान्य गुजारा चलिरहने माध्यम भएका जोकोहीलाई बन्दको प्रभाव खासै नपरेको पनि देखिएकै छ । ज्यालामजदुरी गर्ने व्यक्तिहरुलाई भने यो लकडाउन एउटा घातक नै भएको छ । काम गर्न जाऊँ भने कतै खुला छैन । घरमै बसौँ भने बिहान बेलुका के खाने भन्ने समस्या छ ।
बिहानबेलुका हातमुख जोड्न धौधौ परेका, अत्यन्तै दयनीय आर्थिक अवस्था भएका गरिब जनतालाई सरकारद्वारा राहतस्वरुप खाद्यान्न वितरण गरिएको भन्ने हल्ला नि यदाकदा सुनिएको नै थियो । तर जसले पाउनुपर्ने उसले नपाएर जो सम्पन्न छ, जसलाई खानलाउन कुनै मुस्किल छैन उसले चाहिँ भनसुनको आधारमा खाद्यान्न पाएको जनगुनासो नि सुनिएकै हो ।
राहत त बाँडियो तर आफूले बाँडेको राहत सही ठाउँमा उपयोग भयो कि भएन कसले सोच्ने, कस्ले बुझ्ने ? फोटो खिचेर चर्चामा आउन पाए भइगयो सम्बन्धित निकायलाई । कोरोना रोगले मानिसमा आतंक मच्चाई नै रहेको छ । साथै यसले मानिसलाई डिप्रेसनको साथै आत्महत्याको बाटोतर्फ पनि लगेको पाइन्छ ।
कहिलेसम्म बन्द हो भन्ने अनभिज्ञतामा प्रायः सबै परेकै छन् । कोरोनाको बारेमा धेरै नकारात्मक फैलावटसँगै डर पनि उत्पन्न भएको छ । साथै मानिसहरुमा भेदभाव नि बढिरहेको छ ।
कोरोना नियन्त्रणको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले दिने अभिव्यक्ति पनि चित्त बुझ्दो छैन । ‘टपक्क टिपेर ल्याएको हो र ? फु मन्त्र लगाएर उडाउने हो र ?’ भन्ने खालका उत्तर पनि आएको छ सबैभन्दा माथिल्लो निकायबाट ।
राजनीतिक क्षेत्र सधैँ आफ्नै लालचमा अगाडि बढिरहेको छ । देश महामारीको चपेटामा परिरहेको बेला देशलाई नेतृत्व गर्नेहरु कुर्सीको लोभमा तँछाडमछाड गर्दै एक आपसमा भिडिरहेका छन् । यस्तो लाग्छ उनीहरुलाई न त महामारीको डर छ, न त लकडाउनको, न त कोरोनाको । देशमा आएको यो विषम परिस्थितिको घडीमा उनीहरुले कतिबेला र कसरी सोच्छन् त ?
बन्दको विरोध गर्दै सडकमा उत्रिएकाहरुलाई खोइ कसरी गलत कार्य हो भन्ने ? बन्द कोठाभित्र के खाएर बाँच्ने ? के भोको पेट कोरोनाको डरमा लुक्न सक्छ र ? अनि यो लकडाउन के साँच्चै गरीब, निमुखा जनताको लागि मात्रै हो त ? देशमा कुनै महामारी नहुँदा पनि गरिब जनताले सरकारमार्फत् केही पाएका थिएनन् । तर अहिलेको अवस्थामा त केही हेर्नुपर्ने होइन र सरकारले ?
जनता घरभित्र थुनिएर बस्नु मात्रै समस्याको समाधान हो र ? कसले बुझिदिने गरिब जनताको मर्म ?
विश्वका २ करोड कोरोना संक्रमित निको, ७० लाख आइसोलेसनमा
उपत्यकामा जोरबिजोर प्रणालीमा सार्वजनिक सवारी पनि चल्ने